Tri Series in Zimbabwe Archives - SCORELINE
Harare: Opener Fakhar Zaman cracked a career-best 91 to help set up Pakistan’s six-wicket win over Austra ...
Harare: Opener Fakhar Zaman cracked a career-best 91 to help set up Pakistan’s six-wicket win over Australia in the final of the Twenty20 tri-series at Harare Sports Club on Sunday. Zaman shared in a ...
Harare: Glenn Maxwell hit a half-century for Australia as they chased down Zimbabwe’s 151 for nine with a ...
Harare: Glenn Maxwell hit a half-century for Australia as they chased down Zimbabwe’s 151 for nine with a ball to spare in a tightly-contested Twenty-20 match Friday. Maxwell's 56 -- his first half ce ...
Zaman’s career-best 73 sparks Pakistan to victory over Australia
Harare: Shaheen Afridi took three wickets as Pakistan completed a clinical 45-run victory over Australia ...
Harare: Shaheen Afridi took three wickets as Pakistan completed a clinical 45-run victory over Australia on Thursday in the Twenty20 tri-series in Zimbabwe. Pakistan batted first and opener Fakhar Za ...
Harare: Australia, Pakistan and Zimbabwe meet in a T20 tri-series starting in Harare on Sunday with the w ...
Harare: Australia, Pakistan and Zimbabwe meet in a T20 tri-series starting in Harare on Sunday with the world number one ranking on the line in the sport's shortest format. Pakistan travel to Zimbabwe ...
Dublin, Ireland : A dashing unbeaten 87 by Soumya Sarkar inspired Bangladesh to an eight-wicket victory o ...
Dublin, Ireland : A dashing unbeaten 87 by Soumya Sarkar inspired Bangladesh to an eight-wicket victory over hosts Ireland in the fourth match of the Tri-Series with almost 23 overs to spare on Friday ...